PP PE တောင့်တင်းသော ပလတ်စတစ်များနှင့် အညှစ်ခံရသော ပလတ်စတစ်များအတွက် တရုတ် SJ အမျိုးအစား pelletizing စက် ထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် စက်ရုံ |PuRui
ဆောင်ရွက်ဆဲ ပစ္စည်း-တင်းကျပ်သော ပလတ်စတစ် PP၊ PE အပေါက်များ၊ ABS၊ PC၊ PA စသည်တို့နှင့် ညှစ်ထားသော PP နှင့် PE ရုပ်ရှင်များ၊
Degassing စနစ်-အလွန်ကောင်းမွန်သော ဖုန်စုပ်စုပ်စနစ်။
SJ pelletizing machine သည် PE၊ PP, PS, ABS, PC, PA6 စသည်တို့ကဲ့သို့ တင်းကျပ်သော ပလတ်စတစ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် အဓိကဖြစ်သည်။ အဆိုပါ တောင့်တင်းသော ပလတ်စတစ်များသည် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဆီနှင့် လောင်စာအတွက် HDPE ဒရမ်များ၊ HDPE နို့ဗူးများ၊ ဆပ်ပြာများ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်ပုလင်းများ စသည်တို့။ ၎င်းသည် ဆေးကြောထားသော PE၊ PP ရုပ်ရှင်များနှင့် အပျော့စား ပလတ်စတစ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
l PE၊ PP၊ PS၊ ABS၊ PC၊ PA6 တို့ကို ကြေမွသွားအောင် သို့မဟုတ် ပြန်ကြိတ်ပါ။
l ညှစ်ထားသော PP နှင့် PE ရုပ်ရှင်များကို ဆေးကြောပါ။
1. နှစ်ကြိမ် စစ်ထုတ်ခြင်းသည် လုံးစေ့များ၏ အရည်အသွေးကို အာမခံပါသည်။ပထမအဆင့် filtering mesh အရွယ်အစား 60mesh ကိုသုံးနိုင်သည်။ဒုတိယအဆင့် filtering mesh သည် 80-100mesh ဖြစ်လိမ့်မည်။
2.Great vacuum degassing စနစ်။ကျွန်ုပ်တို့သည် pelletizing line တွင်ရေလောင်းလေဟာနယ်ပန့်ကိုအသုံးပြုသည်။extruder မှ ထွက်လာသော ဓာတ်ငွေ့များ ကုန်ဆုံးသွားပြီး စစ်ထုတ်ရန်အတွက် ရေဆလင်ဒါထဲသို့ ရောက်သွားပါသည်။
3.ဝက်အူဒီဇိုင်းသည် သီးခြားပစ္စည်းများအတွက် အထူးပြုပါသည်။
4.ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအပူပေးစက်များသည် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အချိန်နှင့်အတူ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရပါသည်။
5.Pelletizing နည်းလမ်းသည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ရေလောင်းခြင်းအား PP နှင့် PE ရုပ်ရှင်များအတွက် သင့်လျော်ပြီး ကြိုးမျှင်ထိုးခြင်းအတွက် PP PE နှင့် PC နှင့် ABS နှင့် PA တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ထို့အပြင် ရေအောက် မှိုသတ်ခြင်း သည် universal ဖြစ်လိမ့်မည်။Pelletizing နည်းလမ်းအားလုံးသည် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူပြီး တာရှည်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
6. Good motor အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော torque ဂီယာအုံ။ကျွန်ုပ်တို့သည် UL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ABB မော်တာများနှင့် Siemens မော်တာများကို ရွေးချယ်နိုင်သော တရုတ်နိုင်ငံမှ အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်မော်တာများ၊ Dazhong၊ နှင့် WEG ကို အသုံးပြုပါသည်။လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများသည် နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ် Schneider သို့မဟုတ် Siemens ကိုအသုံးပြုသည်။အပူချိန်ထိန်း OMRON။Siemens PLC ထိန်းချုပ်မှုကို ရနိုင်သည်။စက်ထဲမှာ လျှပ်စစ်ကာကွယ်နည်းကောင်း။
7.စက်ရုံတွင်ဘေးကင်းမှုနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း။ကျွန်ုပ်တို့တွင် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပလတ်စတစ် pelletizng နယ်ပယ်တွင် 16 နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံပေါင်း 80 ကျော်သို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သည်။အတွေ့အကြုံများစွာနှင့် နည်းပညာလုပ်သားများဖြင့် ဖြေရှင်းပေးသင့်သည်။ပလပ်စတစ်ပြန်လည်အသုံးပြုစက်.
ယခင်- HDPE ဆပ်ပြာပုလင်းများနှင့် နို့ဗူးအဝတ်လျှော်လိုင်း ရိုးရိုးတန်းစီ ပလပ်စတစ်ပြန်လည်အသုံးပြုစက်
နောက်တစ်ခု: အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသော ပလတ်စတစ် ဖလင်နှင့် အမျှင်များနှင့် အိတ်များကို ကြိတ်စက်